ဟောပြောပွဲအတွက် နောက်တကြိမ်လာရန် သက်ဆင်ကို မြန်မာအစိုးရ ဖိတ် | ဧရာဝတီ
ဟောပြောပွဲအတွက် နောက်တကြိမ်လာရန် သက်ဆင်ကို မြန်မာအစိုးရ ဖိတ်
သန်းထိုက်ဦး| November 9, 2012 | Hits:5,249
4 | | ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံ ဆီယံယိဒ် နိုင်ငံတကာ လေဆိပ်သို့ ဧပြီ ၁၄ ရက် က ရောက်လာသည့် ထိုင်း ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း မစ္စတာ သက်ဆင် (ဓာတ်ပုံ – Reuters)
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း သက်ဆင် ရှင်နာဝပ်ကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ နောက်တခေါက် ထပ်လာရန် ဖိတ်ကြားထားသည်ဟု သိရသည်။
မစ္စတာ သက်ဆင် ရှင်နာဝပ်က သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကို နေပြည်တော်တွင် ယမန်နေ့က သွားရောက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ် ထပ်မံ ဖိတ်ကြားခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ မစ္စတာ သက်ဆင်ကို စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှု၊ ဆင်ရဲမွဲတေမှု ပပျောက်ရေးနှင့် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံဖြိုးရေးတို့နှင် ပတ်သက်၍ ဟောပြော ပို့ချပေးရန် ဦးသိန်းစိန်က ဖိတ်ကြားခြင်းဖြစ်ကြောင်း မစ္စတာ သက်ဆင်၏ ဥပဒေဆိုင်ရာ အကြံပေးအရာရှိ နော့ပဒုံ ပတ္တမာ (Noppadon Pattama) က ပြောသည်ဟု ယနေ့ထုတ် The Nation သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
“သက်ဆင်က ဒီမိုကရေစီအတွက် မြန်မာ့ စီးပွားရေးနဲ့ နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကို ချီးမွမ်းစကားဆိုခဲ့ပြီး ဒါဟာ အနောက်နိုင်ငံများနဲ့ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းက သတိထားမိစေတဲ့ အချက်လည်းဖြစ်တာကြောင့် မြန်မာအပေါ် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေ ရုပ်သိမ်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်” ဟု နော့ပဒုံ ပတ္တမာက ၎င်း၏ ဖေ့စ်ဘုတ် စာမျက်နှာတွင် ရေးသားထားသည်။
မစ္စတာ သက်ဆင်သည် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် တွေ့ဆုံစဉ် အာဆီယံ အနာဂတ်အပါအဝင် ဒေသတွင်း ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မစ္စတာ သက်ဆင်သည် ယမန်နေ့က ရောက်ရှိလာပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားကြောင်း၊ တာချီလိတ်မြို့ကို ၂ ရက်ခန့်အကြာ သွားရောက်လည်ပတ်ပြီး ၎င်းကို ထောက်ခံသည့် ရှပ်နီများနှင့် တွေ့ဆုံရန် စီစဉ်ထားသော်လည်း အသက်အန္တရာယ် လုပ်ကြံမည် ဟူသော ကောလာဟလများကြောင့် လုံခြုံရေး အခြေအနေအရ ဖျက်သိမ်းခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
၀န်းကြီးချုပ်ဟောင်း သက်ဆင်သည် အောင်မြင်သော စီးပွားရေးသမားဖြစ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ စီးပွားရေး တိုးတက်ခဲ့သဖြင့် လာအို၊ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံများသို့ အလည်ရောက်စဉ်က စီးပွားရေး စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဟောပြောပို့ချမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ဖူးသည်။
မစ္စတာ သက်ဆင်သည် ၀န်ကြီးချုပ်အဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့စဉ်က အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ခဲ့ပြီး အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထိုစဉ်က အာဏာရယူထားသည် စစ်အစိုးရနှင့် ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ခဲ့ကာ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွင် ငွေအလုံးအရင်းဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် အာဏာ အလွဲသုံးစားလုပ်မှု၊ ခြစားမှု စွပ်စွဲချက်များဖြင့် စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းယူခဲ့ပြီးနောက် မစ္စတာ သက်ဆင်သည် ဒူဘိုင်း၊ မွန်တီ နီဂရိုး၊ ပြင်သစ်နှင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံများသို့ လှည့်လည် သွားလာနေထိုင်ခဲ့သည်။
ယင်းအမှုများကို ရင်ဆိုင်ရန် ထိုင်းတရားရုံးချုပ်မှ ဆင့်ခေါ်ထားပြီး အတိုက်အခံ အဖွဲ့တခုဖြစ်သည့် ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီခေါင်းဆောင် အဖိဆစ် ဝေ့ချာချီဝကလည်း ၀ရမ်းထုတ်ခြင်းခံထားရသည့် မစ္စတာ သက်ဆင်ကို ဖမ်းဆီးကာ ထိုင်း တရားဥပဒေအတိုင်း ရင်ဆိုင်ခိုင်းသင့်ကြောင်း မစ္စတာ သက်ဆင်၏ ညီမ၊ လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ် ယင့်လပ် ရှင်နာဝပ် ဦးဆောင်သော ထိုင်းအစိုးရကို တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
မစ္စတာ သက်ဆင်သည် အိမ်နီးချင်း မြန်မာ၊ ကမ္ဘောဒီးယား စသည့်နိုင်ငံများကို လာရောက်လည်ပတ်လေ့ရှိပြီး ၀န်ကြီးချုပ် ယင့်လပ် ရှင်နာဝပ် အာဏာရခါစ ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်းက မြန်မာနိုင်ငံသို့ တကြိမ်သွားရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကျူးကျော် နေထိုင်သည့် ထိုင်းနိုင်ငံသား ၉၂ ဦးကို ထောင်ဒဏ် ချမှတ်
သက်ဆင် ထားဝယ် ရေနက်ဆိပ်ကမ်း လေ့လာ
ဘန်ကောက်မြို့လယ် ဗုံးကွဲမှု ၃ ဦး သေဆုံး၊ ၂၁ ဦး ဒဏ်ရာရ
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment People November 9, 2012 - 8:06 pm	Thein Sein invite again Criminal PM. so very very bad thinking.
Reply	Burmann November 9, 2012 - 8:11 pm	How we believe that kind of PM
Reply	မင်းမျိုးနုိုင် November 10, 2012 - 9:25 am	သက်ဆင်သည် လောလောဆယ်တွင် ဘယ်နိုင်ငံ၊ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကို ကိုယ်စားပြုသူဖြစ်ပါ
သနည်း။ ထိုင်းနိုင်ငံကတော့ သက်ဆင်အားဝရမ်းထုတ်ထားသည်ဟုဆိုနေပါသည်။သိန်းစိန်
သည် သိပါလျှက်နှင့် သက်ဆင်အားလက်ခံဆက်ဆံနေသည်မှာထိုင်းအစိုးရအားဂရုမစိုက်ရာ
ကျသည်နှင့်တူမနေဘူးလား။ သိန်းစိန်သည် လွတ်တော်ကိုမတိုင်ပင်ပဲ စစ်အစိုးရကစေခိုင်း
သဖြင့်လုပ်နေရပါသလား။ သိုို့ဆိုလျှင် လက်ရှိအစိုးရသည် ရုပ်သေးအစိုးရဖြစ်နေကြောင်း
Reply	tinzawhtoo November 10, 2012 - 4:00 pm	အိပ်ငိုက်နေတာများပါတယ်
Reply	ဘုံမိ November 12, 2012 - 11:25 pm	ထက်ဆင် ထိုင်းနိုင်ငံကငွေတွေ ဘယ်လိုခိုးခဲ့တယ်ဆိုတာ သိန်းစိန်းသိခြင်ပါ
Reply	sit min November 20, 2012 - 6:02 pm	ဘာတွေရှောက်ရေးနေကြတာလဲ။
ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့တွင် မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ရုံး ဖွင့်လှစ်
ထိုင်း-မြန်မာ ဗီဇာ ကင်းလွတ်ခွင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင် နဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်
ပေါ်ပြူလာ ဖြစ်လာသော ထိုင်းသရဲကားများ
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ အလုပ်သမားများအား တနှစ်သက်တမ်းရှိ ပန်းရောင်ကတ်များ ထုတ်ပေးမည်
အကျဉ်းသားများကို ငါးဖမ်းလှေတွင် ခိုင်းမည့် ထိုင်းအစိုးရ အစီအစဉ် နိုင်ငံတကာ ကန့်ကွက်
လိပ်ကျွန်း လူသတ်မှု ဒုတိယရုံးချိန်း တရားလိုပြ သက်သေ ၄၀ တင်ပြ
လိပ်ကျွန်း လူသတ်မှုစွပ်စွဲခံ မြန်မာ ၂ ဦးဘက်မှ သက်သေလိုက်ရန် စိုးရိမ်မှုများရှိ